Isbeddellada ku yimaadda kabaha ragga: qaababka inta badan la xidho | Ragga Stylish
Isbeddelada maanta ee kabaha ragga waxay bixiyaan waxyaabo badan oo beddel ah (in kasta oo uu jecel yahay inuu aado dhinaca daran). In sidan, waxaad fursad u leedahay inaad sameysid isbeddello ku habboon qaabkaaga oo aan ahayn dhinaca kale.
Noocyada soo socda ayaa ah qaababka ugu caansan sanadkan. Sida ay u dhacayso, qaabka caadiga ah iyo raaxada leh ee kabaha isboortiga ayaa ku badan. Qaabab isdaba-joog ah iyo qaabab naqshadaysan iyo kuwa dib-u-dhac ah ayaa adkaanaya. Xaaladdaan aadka u daran awgeed, midabada xiran waxaa ka mid ah fudeydka cad ilaa geesinimada fluorine iyo daabacaadda-dye.
1 Kabo yaryar
2 Dharbaaxayaal Retro
2.1 Xidho funaanadaha oo leh suud
3 Kabo shaqeynaya
3.1 Kabaha shaqada
4 Sneakers ee codadka iftiinka
5 Midabada fluor
6 Daabac daabacan
Kabo yaryar ayaa la wareegaya. Iyo kan weyn ayaa ka sii fiican. In kasta oo ay wax walba ku bilaabmeen kabaha aabaha Balenciaga (Triple S), waxaan hadda ka heli karnaa cagaha la buunbuuniyey (curiyaha ugu muhiimsan ee isbeddelkan) qaabab kala duwan oo ballaadhan. Kabaha isboortiga ee mustaqbalka iyo kuwa xiisaha leh ayaa sidoo kale qaatay mugga, waana sababta aad hadda ugu dhex dari karto muuqaalkaaga siyaabo ka badan bilowgii.
Tani waa isbeddelka muhiimka ah ee sanadkan, sidaas darteed kudarista labo kabood oo iskeeti ah oo kujira ururintaada ayaa kaa caawin doonta inaad u ekaato qabow. Caddaanku wuxuu ka caawiyaa inay iyaga xakameeyaan, iyadoo lagu darayo naqshad midab leh cabbirkooda weyn waxay damaanad qaadi doontaa in aan la ogaan doonin.
Sneakers fiiqan shaki kuma jiri doono markale. Laakiin waxay umuuqataa inay wali waqti dheer ujirto isbeddelka mugga inuu naga tago. Ilaa iyo markaa, haysashada kabo kabo adag oo adag oo ku yaal xargaha kabaha ayaa ah wax ay tahay inaad bilowdo inaad si dhab ah u tixgeliso haddii aadan horey u haysan kaaga. Dhinaca kale, taasi macnaheedu maaha inay khalad tahay inaad run ku ahaato qaab ka soo horjeed ah, sida qaar Chuck taylor ama Vans qaar ka mid ah.
Marka la eego tirada sii kordheysa ee xiiseeyayaasha dharka isboortiga dugsiga hore, la yaab ma leh in mid ka mid ah isbeddellada ugu waaweyn ee kabaha ragga ay yihiin kabo ciribtiro.
In kasta oo lagu cusboonaysiiyay agabyo cusub, haddana waxay maareeyaan inay ilaashadaan tayadooda aan waqtiga lahayn inta badan kiisaska. Taas waa inaan ku darnaa kala duwanaansho ballaaran (waxaa la caddeeyay inay si fiican ula shaqeeyaan ficil ahaan dhammaan surwaalada dharka ragga). Dhab ahaantii, iyagu waa maalgashi heer sare ah qaabkaaga.
Xidho funaanadaha oo leh suud
Fiiri maqaalka: Suudhka iyo kabaha. Halkaas waxaad ka heli doontaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato si loogu daro qaar ka mid ah kabaha isboortiga ee dharkaaga.
Shirkado aad u tiro yar ayaa awood u yeeshay inay iska caabiyaan jirrabaadda lagu dhiirrigelinayo ka faa'iideysiga kabaha. Sanadkan waxaa soo socda qulqulo ka mid ah kabaha u eg qaabka buurta ee loogu talagalay magaalada, labadaba qaab kabaha iyo kabaha isboortiga.
Ikhtiyaar kale oo kaa caawin doona inaad ahaato mid qabow, adoo ka dhigaya waxqabadka kahor bilicsanaanta, waa kabo dharka lagu qurxiyo.. Awoodda ayaa la xambaarsan yahay, dhinacaasna shaqooyinka shaqadu waxay leeyihiin tartan yar, waana sababta ay u yihiin kabo kale oo ay tahay inaad tixgeliso.
Fiiri maqaalka: Kabaha shaqada ugu fiican ee ay sameeyeen noocyada raaxada. Halkaas waxaad ka heli doontaa dhammaan noocyada kabaha noocan ah ay qaadan karaan.
Sneakers ee codadka iftiinka
Dhib malahan haddii ay badan yihiin ama dhuuban yihiin, midabada ay doorbidaan nashqadeeyayaasheeda isboorti waa iftiin, gaar ahaan cadaan. Si kastaba ha noqotee, joogitaanka xoogga leh ee caddaanku ma aha wax lala yaabo, maaddaama fudeydkeeda iyo nadaafaddeeda ay isku soo rogeen xulashooyinka intiisa kale in muddo ah.
Dhinaca kale, haddii aad doorbideyso inaad iska ilaaliso caddaanka ama aad horey u haysatay labo midab oo midabkan ah oo ku jira salka kabahaaga, waxaad ka heli doontaa fursado badan hooska iftiinka dhexdhexaadka ah ee si siman u dhigma, sida bunni ama cawl.
Midabada jilicsan ayaa ah mid ka mid ah isbeddellada ugu dhiirran sanadkan. Waxaan fursad u heli doonnaa inaan ku aragno saameynteeda dhalaalaysa dhammaan noocyada gogo 'xilliga guga / xagaaga. Kabaha isboortiga ayaa ah ikhtiyaar mudan in la tixgeliyo haddii aad jeclaan lahayd inaad raacdo isbeddelkan laakiin funaanadaha neonooyinka iyo surwaalku aad ayey kuugu badan yihiin adiga.
Waa sidaas shirkado badan ayaa bixiya suurtagalnimada in la xidho neon si khiyaano leh, oo ku koobnaanaya taabasho yar. Laakiin haddii aad doorbideyso neon inuu kabo dhexe u galo kabahaaga, waxaad sidoo kale heli doontaa moodello fara badan oo dusha ka wada qabsan kara. Noocyo hal-midab leh oo fluorine ah ama kali ahaan marka laga reebo keliya.
Isku-xidhka-dye wuxuu u yimid inuu keeno qiyaaso badan oo midab leh oo fudud xagga isbeddellada ee kabaha ragga sannadkan. Kabaha isku-xidhka ah ee loo yaqaan 'tie-dye' ayaa laga yaabaa inaanay u shaqeyn sidii kabo ugu horreeya, ama xitaa ilbidhiqsi (inkasta oo ay dhammaantood kuxiran yihiin qaabkaaga). Si kastaba ha noqotee, Xilliga kuleylaha kama maqnaan doontid munaasabado aan rasmi ahayn oo aad ku soo dari karto labo shiraac (ama xarig ama xarig ku dheji) muuqaalkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Isbeddellada kabaha ragga